शहिदनगरका मेयर बरबरिया र लेखापाल १५ दिनदेखि गायब ! - No 1 News Portal Online News Nepal
Home मधेश प्रदेश शहिदनगरका मेयर बरबरिया र लेखापाल १५ दिनदेखि गायब !
शहिदनगरका मेयर बरबरिया र लेखापाल १५ दिनदेखि गायब !
धनुषा : धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरिया र लेखापाल लोकबहादुर नेपाली विगत १५ दिनदेखि गायब छन् ।
मेयर बरबरिया र लेखापाल नेपाली कार्यालय आउन छाडेपछि कामकाज प्रभावित बनेको छ । मेयर बरबरियाले कार्यालय कहिलेसम्म नआउने विषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र उपमेयरलाई समेत जानकारी गराएका छैन ।
स्रोतका अनुसार मेयर बरबरिया काठमाडौंमा छन् भने लेखापाल नेपाली कहाँ गायब छन् भन्ने विषयमा कर्मचारीहरु अनभिज्ञ छन् । अधिकृत धिरेन्द्र कर्णले मेयर बरबरिया कार्यालय किन नआउने गरेको विषयमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मेयर साहब काठमाडौं गएका जानकारी पाएको छु । तर आधिकारिक जानकारी छैन ।’
यता, उपमेयर शिला कापरले मेयर बरबरिया १५/१६ दिनदेखि कार्यालय नआएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँ (मेयर) काठमाडौं जानुभएको छ । कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन ।’
मेयर कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहनुपरेमा उपमेयरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर मेयर बरबरियाले उपमेयरलाई निमित्त दिएका छैन । उपमेयर कापरले पनि निमित्तको जिम्मेवारी नदिएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
लेखापाल नेपाली पनि अनुपस्थित भएपनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई जानकारी गराएका छैन । अधिकृत कर्ण भन्छन्, ‘लेखापाल कहाँ छन् मलाई केहि थाहा छैन । अनुपस्थित भएको लामो समय वित्दापनि कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन ।’ तर उपमेयर कापरले लेखापाल नेपाली विरामी परेका कारण विदा लिएको बताएकी छन् ।
अधिकृत कर्णले मेयर र लेखापाल अनुपस्थित हुँदा दैनिक कैयौं सेवाग्राही कार्यालयबाट फर्किने गरेको बताए । उनले भने, ‘मालपोत कटाउन र विभिन्न दस्तुर तिर्न आउने सेवाग्राहीहरु फर्किने गरेका छन् ।’ मेयर र लेखापाल कार्यालय नआउँदा बाँकी रहेको असारको योजनाहरु पनि फर्छयोट हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
यस्तै वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष नागेन्द्र मण्डलले मेयर, उपमेयर र लेखापाल कार्यालय नआउँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै गुनासो गरेका छन् ।
‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर,’ वडाध्यक्ष मण्डलले लेखेका छन्, ‘सन्दर्भ शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लेखा । जनताको कामकाज छाडेर काठमाडौं गई सरुवा–बढुवामा व्यस्त । हामी जनप्रतिनिधिका काम काज के हो कहिले बुझ्ने कुनी ।’
स्रोतका अनुसार अधिकृत कर्ण र अन्य केहि कर्मचारीसँग कुरा नमिल्दा उनीहरुको सरुवा गराउन मेयर बरबरिया काठमाडौं पुगेका छन् ।
उनी नेकपाबाट निर्वाचित मेयर हुन् । अहिले नेकपाकै नेतृत्वमा संघीय सरकार रहेको छ । सोही कारण मन्त्रीसँग हारगुहार गरी अधिकृत र कर्मचारीको सरुवा गराउन काठमाडौं पुगेका हुन् ।
‘मेयर बरबरियाले गर्न नहुने कामका लागि पनि अधिकृत र कर्मचारीलाई दबाब दिने गर्छन्’, एक कर्मचारीेले भने, ‘तर हामीले गलतको साथ नदिँदा हामीलाई सरुवा गराइदिने धम्की दिनुभएको छ । सरुवा गराउनकै लागि उहाँ काठमाडौं पुग्नुभएको छ ।’
यस विषयमा मेयरसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा हुन सकेन । लेखापाल नेपाली पनि सम्पर्कमा छैन ।todaykhoj
Previous articleलगातारको वर्षाले तरकारी खेती सखाप
Next articleवैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न सिफारिस